08 Feb 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Abune Pheexiroos haala uffanna saanii. Uffatnii kuniifi maskallii isaani Magaala Baatuu(Ziway), Oromiyaattii argamaa.
Siida Abune Pheexiroos (Maqaa dhaloota: Magarsa Badhaasa). Finfinnee Birbirsa Gooro/Piyaasattii kan argamu.
Ququllu nama rabbii bara dhiyoo isaan qoofa kan taa’nii kan ibsuu!!! qaaman nubira dhabamanuus afuurii qulqullu isaanii rabbi wajjin nuu haa araarsuu!!!Amiin!!!
Gebre Mariam Mellese
Sagaalee jireenya bara baraan isaani dhagesisuu
Roben biniyam TD yaadata
Seenaa akkas dhokkaate ture nubaasu keessanif waaqayyoo m/isaarraatti sin ha yaadatu.ebbifama
Jabadha Waqayoo sagalee jireenya siin haa dhagesisuu!
hora sanbata itafa
seenaa gototaa oromoo kan dhokatanii jiraan akkasumas enyumaan issanii kan dhokfamee heddutuu jiruu aderaa kessan namonii birroos ifaa basaa xalayaa jalalatif gumachaa. bayye galatomaa warii fulaa xalayyaa jalalaa jabadhaa!!!!
Baay’ee nama tola